Fanitsiana ny fanavaozana ny fampandrenesana ny orinasam-panjakana voarakitra
Fanoroana lahatsoratra iray dia ilaina amin'ny fanovana ny vaovao voarakitra momba ny orinasanao. Ny lahatsoratra dia nalefa tamin'ny biraon'ny sekreteram-panjakana, toy ny fampidirana. Ny antony voalohany mahatonga ny fananganana lahatsoratra ho an'ny orinasa dia:
Fanovana ny anaran'ny orinasa
Fiovàna ho an'ny isa an'ny Antenimierampirenena
Fiovàna ho an'ny saran'ny fampitahana orinasa
Fanampiana na fanesorana tale, manamboninahitra, tomponandraikitra
Ny fanitsiana lahatsoratra dia napetraka ary novana ny fanovana ao amin'ny lahatsoratra ifandraisanao. Ireo orinasa voapetraka dia hanampy anao amin'ny fanomanana sy ny fanekena ny fanitsiana lahatsoratra any amin'ny fanjakana 50.
Fanitsiana ny fananganana ambaratonga
Azonao atao ny miantso ny Companies Incorporated ary mandidy ny tolotra amperim-pivoarana ary ny departemanta misahana ny lalàna dia hanomana ny antontan-taratasy. Azonao atao ny manara-maso sy manasonia ny fanitsiana nataonao, ary, rehefa nankatoavina, dia hajanona ireo lahatsoratra miaraka amin'ny birao foibenay. Amin'ny ankapobeny, ny firenena rehetra dia samy hafa amin'ny fotoam-piraketany, na izany aza, indray mandeha dia napetraka ny lisitry ny orinasa tokony havaozina amin'ny fanitsiana.
Fanehoan-kevitra momba ny Fanitsiana
Manao ny saram-panoloran-tenan'ny $ 199 sy ny saram-pandefasan'ny fanjakana ho an'ny dingana manontolo ianao ary hiova amin'ny dingana iray mora foana ny firaketana ny orinasa.